Dagaal Twitter ah oo Corona ah oo u dhexeeya dibloomaasiyiinta Shiinaha iyo Mareykanka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dagaal Twitter ah oo Corona ah oo u dhexeeya dibloomaasiyiinta Shiinaha iyo...
Dagaal Twitter ah oo Corona ah oo u dhexeeya dibloomaasiyiinta Shiinaha iyo Mareykanka
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda Arimaha Dibadda Shiinaha ayaa soo saaray fikirka shirqoolka ah ee viruska Corona, isagoo soo jeediyay in ciidamada Mareykanka ay door ku leeyihiin fidinta fayraska.
Soojeedintani waxay iftiimisay xiisada sii kordheysa ee ka dhexeysa labada dowladood ee ugu waaweyn dhanka dhaqaalaha, iyadoo labada dowladood ay raadinayaan inay ka fogaadaan in lagu eedeeyo faafitaan.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa horey u sheegay in dowladda Shiinaha aysan ula dhaqmin si sax ah fayraska, ayna mas’uul ka ahayd faafitaankeeda adduunka oo dhan.
Afhayenka Wasaaradda Arimaha Dibadda Shiinaha Zhao Legian ayaa u yimid inuu saliid ku shubo dabka markii uu ku jawaabayay bartiisa twitter-ka, isagoo leh, “Waxaa laga yaabaa in ciidamada Mareykanka uu cudurka faafa u keenay Wuhan.” “Si cad u muuji! Mareykanka wuxuu nagu leeyahay sharaxaad!”
Ka dib wuxuu raacay iyada oo leh tweet kale oo ku boorinaya 284,000 taageerayaashiisa ah inay ka qeybqaataan, isagoo la yaaban haddii viruska ku soo kordhay Mareykanka. Waxaa lagu soo daabacay degel internet ah oo dhiirrigeliya aragtiyaha shirqoolka, oo ay ku jiraan qodobo xasaasi ah oo ah “gobolka tallaalka qotada dheer”, oo hore su’aal looga keenay inuu Osama Bin Laden ahaa qof dhab ah weligiis jiray.
Afhayenka Wasaaradda Arimaha Dibadda Jing Shuang oo ku sugan magaalada Beijing ayaa yiri “Beesha Caalamka, oo ay ka mid tahay Mareykanka, waxay leeyihiin fikrado kala duwan oo ku saabsan halka laga keenay virus-ka.
Ging ayaa laba jeer la weydiiyay haddii bogiisa hore ee saaxiibkiis Zhao uu matalay aragtida dowladda Shiinaha. Wuxuu ku jawaabay, “Waxaan u maleynayaa inaad weydiiso qaar ka mid ah saraakiisha sare ee Mareykanka, miyay ku hadlayeen magaca dowladda Mareykanka markii ay dhowaan weerareen oo ay sumcadeen sumcadda Shiinaha?”
Markii coronavirusku ku faafayo Shiinaha oo ku faafo Mareykanka iyo adduunka oo dhan, labada waddanba waxay isweydaarsadaan eedeymo ku saabsan asalkooda. In kasta oo aysan caddayn in Zhao uu si iskiis ah ulahadlay iyo in kale, wuxuu noqday sarkaalkii ugu horreeyay ee Shiinaha ka tirsan ee caddeeya in fayrasku aanu asal ahaan ka soo jeedin, laakiin ma aanu bixin caddayn sheegashadan.
Isaga oo ka jawaabaya su’aal ku saabsan eedeynta, Ging wuxuu horaantii usbuucan yiri “asal ahaan viruska waxaa lagu go’aamin karaa aqoonta”, wuxuuna rajeynayay in arinta aan loo adeegsan doonin “dhaleeceyn” wadan walba.
Trump ayaa markale dib ugulaabtaya “viruska Shiinaha” wuxuuna kicinayaa xiisad
Madaxweyne Donald Trump, oo wajahaya doorashooyinka sanadkan, ayaa doonayay inuu Shiinaha ku eedeeyo viruska, kaasoo ku baahsan suuqyada saamiyada adduunka wuxuuna ku hanjabay inuu adduunka ku riixayo hoos u dhac. Khudbad uu jeediyay telefishan ka hadlay raysalwasaaraha habeenkii arbacada, Trump ayaa Shiinaha ku calaameeyay calaamado badan, oo muujinaya in cudurka uu yahay “virus ajnabi ah” wuxuuna yiri “xayiraado safar oo dhameystiran oo Mareykanka uu ku soo rogay Shiinaha” ayaa ka hor istaagay dillaacay hadda. “Fayrasku wuxuu ka bilowdey Shiinaha oo hadda wuxuu ku fidaa adduunka oo dhan,” ayuu yiri Trump.
Kani maahan murankii ugu horreeyay ee Zhao on Twitter. Intii uu ka shaqeynayey kuxigeenka madaxa howlgalka Shiinaha ee safaaradda uu ku leeyahay magaalada Islamabad bishii Luulyo, wuxuu daabacay waraaqo taxane ah oo looga gol lahaa in lagu muujiyo waxa uu u arkay munaafaqnimada Mareykanka ee lagu dhaleeceynayo diiwaangelinta xuquuqda aadanaha ee Beijing, xilli Washington ay sii xoogeyneysay dhaleeceynteeda xeryaha lagu ururiyo ee ku yaal galbeedka Shiinaha ee Gobolka Xinjiang.
Rice waxay ku tilmaamtay diblomaasi Shiine ah mid cunsuriyad ah
Zhao wuxuu ka hadlay waxkasta oo xun oo ka dhaca America, laga bilaabo toogashada iskuulka iyo sinaan la’aanta dakhliga ilaa midab kala sooca, isagoo raaciyay hadii aad “ku sugan tahay Washington, DC, waad ogtahay dadka cadaanka ah waligood ma tagi doonaan” macnaheedu waa qeybta koonfur bari ee caasimada Mareykanka, oo ah xaafada Mareykanka. Isir ahaan Afrika
Tweet kaas oo markii dambe la tirtiray, laakiin waxaa soo jiitay la-taliyihii hore ee Amniga Qaranka Mareykanka Susan Rice, taasoo dhalisay dood kulul oo ku saabsan internetka.
“Waxaad tahay cunsur aad u xun oo xishood badan oo cunsurinimo ah,, Rice waxay sidoo kale la hadashay safiirka Shiinaha ee Mareykanka, Cui Tiankai, oo dhawaan ku soo biiray akoonnada Twitter.” Danjire Cui, waxaan kaa fileynaa adiga iyo kooxdaagaba inaad sifiican u qabataan. Fadlan samee waxa saxda ah una dir dalkaaga. “
Wasiir Sabriye Oo Weli Kulamo Ka Wada Magaalada Dhuusamareeb